Hal maalin: Wadan muslim ah oo cabista khamriga ogolaaday iyo mid aan muslim aheyn oo mamnuucay. - NorSom News
Dowlada dalka Suudaan ayaa maalintii shaley aheyd sharci dadka aan muslimka aheyn ee dalka Suudaan kunool u ogolaanaya cabista khamriga. Waxaana arintan ay timid kadib markii dalkaas ay dhawaan xukunka la wareegeen dowlad wadaag ah oo kumeel gaar ah ay la dhisay markii xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaas mudo ka talinayay ee Cumar Al Bashiir.
Dhanka kale isla shaleyba, dowlada dalka Koonfur Afrika ayaa mamnuucday iibinta khamriga, si loo yareeyo dhaawacyada dadka ee ka dhasha cabista khamriga, isla markaana loo helo fursad ay isbitaalada dadkaas ula tacaali karaan dhaawacyada xanuunka Corona-virus.
Xigasho/kilde: Sudan tillater alkohol, Sør-afrika forbyr alkoholsalg
Previous articleR.W Norway oo xustay xasuuq 25 sano kahor loo geystay shucuub muslimiin ah.
Next article(Dhageyso): Sweden oo soo saartay sharciyo adag oo saameynaya soo-galootiga